Umgca wokuDityaniswa kweCompact yamanqaku ezithuthi China Manufacturer
Inkcazo:Isongezo seCuightener yeCum engafakwanga,Umgca wokuStamp ngokuzenzekelayo,Indawo yokufaka isitampu kwiindawo ezithile
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > Umgca wokuDityaniswa kweCompact yamanqaku ezithuthi
Umgca wokuDityaniswa kweCompact yamanqaku ezithuthi
IiBhalbhu FE Edere Ilayini Zemoto sokunyathela
Umgca weCompact yokuLungiselela iinxalenye ezizenzekelayo isitampu sokugcina uyilo sidibanisa i-feeder / i-straightener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho ngokuthelekiswa ne-loops eqhelekileyo yeslayidi. Sinikezela ngeempawu ezininzi ezinokukhethwa ukuze zilungele iimfuno ezithile zesicelo, kubandakanywa ii-peelers, ukubamba iingalo, okanye ukuhlangulwa komqhubi. Le nkqubo yenzelwe iitreythi ezingama-0.6-6.0mm ubukhulu kunye nezixhobo ezinamandla ezomeleleyo ezifuna ukuqhutywa kwisimo esichanekileyo. Ngokuqulunqa loop ngezantsi kwesiporho kunye nokufaka feeder kunye ngqo, indawo ebalulekileyo emgangathweni igcinwe. Ukukhutshwa kweenqwelomoya zokondliwa kokubini kunye nokuqengqeleka ngqo, kuya kwenza uyilo olululo kwizicelo zokufa eziqhubekayo.
Umgca wokuDityaniswa kweCompact yamanqaku ezithuthi Uluhlu luqonda ngokuthe ngqo kumgangatho othe tye wokuphelisa isaphetha kunye nakwimigangatho yokulungiswa kwemfuno ephezulu kunye nokuchaneka kokuqondisa ngokuthe ngqo kwimiqolo yokulungisa imo yokukhanya. Owona mgangatho uphezulu wokusebenza ubanzi, ngokuxhomekeka kuhlobo lwe-strighener, umalunga ne-1800 mm.
Amacandelo aphambili eNkcukacha eziNgcolisekileyo zoKhuseleko lweeComenti zamalungu ezizezitampu njengoko kulapha ngezantsi:
I-MAC4 yokuCoca umgca wokuThwala kumacandelo ezithuthi ezenzekelayo isebenza kumzi mveliso wabathengi bethu.
Umtya wokuCoca iCompact wamalungu ezitampu zokuzenzekelayo kuku f okanye ukwenza umgca wokutya wephepha lomgaqo-siseko.
Lo matshini usebenza kwenye yefektri yabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo lwe-U kunye noMgca wokuThintela ukuPhela kwamanqaku ezitampu.
Umgangatho ophezulu wokutya oshidiweyo Qhagamshelana Ngoku
Umtya weCity weCoil Qhagamshelana Ngoku
ICandelo leKhonkco leKhonkco leKhonkco Qhagamshelana Ngoku
Isongezo seCuightener yeCum engafakwanga Umgca wokuStamp ngokuzenzekelayo Indawo yokufaka isitampu kwiindawo ezithile I-Cum Straightener engafakwanga Isongezo seStrawightener Isongeli seFireightener ye-Press Line Isongezo se-Straightener soKondla iKhola Isongezo se-Uncoiler Straigthener 3 kwi-1